Marwada Xafiiska Madaxtooyadda U Qaabilsan Samafalka Oo Kulan Khaas Ah La Yeelatay Hay’addaha Gargaarka Ee Somaliland Ku Sugan | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Agaasimaha Samafalka Madaxtooyada Somaliland marwo Aamina Maxamed Diiriye, ayaa shalay kulan kula yeelatay xafiiskeeda madaxtooyada hay’addaha ka shaqeeya arrimaha samafalka ee dalka ku sugan. Kullankaa oo ahaa mid Agaasimaha Samafalka Madaxtooyadu
ay ugu kuurgalaayo, isla markaana uu kaga dhegaysanayo warbixinno ku saabsan waxqabadka samafal ee ay hay’adduhu dalka ka hirgeliyaan.
Furitaankii shirkaasi, ayaa ugu horreyn Agaasimaha Samafalka Madaxtooyada Marwo Aamina Maxamed Diiriye, ayaa sheegtay in ujeeddada kullankani uu yahay sidii ay isu baran lahaayeen hay’adaha samafalka ka shaqeeya ee dalka ku sugan oo ay uga wada shaqayn lahaayeen.
“Kullankeenani waa mid isbarasho oo aynu isla ogaanayno waxaad qabataan, si aannu idiinla shaqayno waxaanan idiin sheegayaa inaydaan sas ka qaadin xafiiskan samafalka ee madaxtooyada oo aydaan is odhan waa xafiis idin daba gelaaya, balse waa xafiis idin kaalinaaya oo idinla shaqaynaaya, isla markaana idiin fududaynaaya wixii aad xukuumadda uga baahataan. Markaa waa inaad wixii shaki ee idinku jira aad iska saartaan.
Iminkana waxa loo bahan yahay hawlaha samafal ee degdega ah in aynu meelaha ugu jilicsan hay’ad waliba wixii ay ku biiranayso aynu dardargelino, inkastoo ay waqtigan dalka ay abbaaro iyo biyo la’aani soo food-saartay” ayey tidhi Marwo Aamina Maxamed Diiriye.
Dhanka kale, waxa iyaguna warbixino ay kaga warramayaan habsami u socodka hawlahooda ka soo jeediyey masuuliyiintii ka kala socday hay’adaha gargaarka ee kullankaas ka qaybgalay oo ballan-qaaday in ay si weyn iskaga kaashan doonaan arrimaha samafalka.